कसरी एक कविता लेख्न: आधारभूत सुझाव र चाल यो पाउन को लागी वर्तमान साहित्य
कसरी कविता लेख्ने
एनकर्नी आर्कोया | 09/09/2021 17:00 | कविता
कविता लेख्न सजिलो छैन। त्यहाँ ती जो अधिक सुविधा छ, र जो यो केहि जटिल यो सही बनाउन को लागी केहि जटिल छन्। तर यदि तपाइँ सिक्न चाहानुहुन्छ एउटा कविता कसरी लेख्ने, त्यहाँ केहि सुझावहरु छन् कि हामी तपाइँलाई दिन्छौं कि तपाइँ पक्का गर्न सक्नुहुन्छ कि एक समस्या छैन सुनिश्चित गर्न मद्दत गर्न सक्छौं।
के तपाइँ जान्न चाहानुहुन्छ कि कविता लेख्ने कुञ्जीहरु के हुन्? कसरी प्रेम, पुरानो याद वा कल्पना को एक कविता लेख्न? त्यसोभए संकोच नगर्नुहोस्, तल हामी तपाइँलाई थाहा पाउनु पर्ने सबै कुरा देखाउँछौं।
1 एउटा कविता लेख्नुहोस्, तपाइँ यो गर्नु अघि के थाहा पाउनु पर्छ?
1.1 अन्य तत्वहरु लाई विचार गर्न को लागी
2 एक कविता लेख्न को लागी सल्लाह
2.1 थाहा छ तपाइँ के बारे मा कविता लेख्न जाँदै हुनुहुन्छ
2.2 गीतात्मक भाषा मा मास्टरिंग
2.3 सन्देश र उद्देश्य को लागी तपाइँ खोज्दै हुनुहुन्छ को बारे मा स्पष्ट हुनुहोस्
2.4 यदि तपाइँ उनीहरुलाई आवश्यक छ भने रूपकहरु को उपयोग गर्नुहोस्
2.5 एक कविता को सबै पक्षहरु लाई नियन्त्रण गर्नुहोस्
2.6 विराम चिह्नहरूदेखि सावधान रहनुहोस्
2.7 एक पटक तपाइँ समाप्त, कविता सुनाउनुहोस्
2.8 कविता अध्ययन गर्नुहोस्
एउटा कविता लेख्नुहोस्, तपाइँ यो गर्नु अघि के थाहा पाउनु पर्छ?
एक कविता लेख्न शुरू गर्नु अघि, त्यहाँ केहि आधारभूत अवधारणाहरु छन् कि तपाइँ बाहिर छोड्न सक्नुहुन्न, किनकि सबै पछि ती कविता को सार हो। ती अवधारणाहरु मध्ये एक एक कविता को तत्वहरु संग गर्न को लागी छ। के तपाइँ जान्नुहुन्छ कि यो के बाट बनेको छ?
को कविताहरु तीन तत्व बाट बनेका छन् महत्वपूर्ण:
एक कविता, जुन प्रत्येक प that्क्ति छ कि कविता छ।
एक श्लोक, जो वास्तव मा छंद को एक सेट हो कि एक पटक मा पढ्न र एक अनुच्छेद जस्तै देख्न सकिन्छ।
एक कविता, जो छ के पदहरु संग मेल खान्छ। अब, कविता भित्र तपाइँ एक स्वर पाउन सक्नुहुन्छ, जब मात्र स्वर मेल खान्छ; व्यंजन, जब स्वर र व्यञ्जन मेल खान्छ; र नि: शुल्क कविता, जब तपाइँ कुनै पद्य कविता (यो सबैभन्दा वर्तमान हो) कविता छैन। एउटा उदाहरण हुन सक्छ "यद्यपि रेशम / प्यारा रहन्छ मा बाँदर पोशाक"। तपाईं देख्न सक्नुहुन्छ, पद को अन्त्य प्रत्येक एक मा मेल खान्छ, र त्यो एक व्यञ्जन कविता भनिन्छ। अर्कोतर्फ, यदि हामी भन्छौं «जब मध्यरात आयो / र बच्चा आँसुमा फट्यो, / सय जनावरहरु उठे / र स्थिर जीवित भयो ... / र उनीहरु नजिक गए / र बच्चा / उनीहरुको सय घाँटी तिर फैलियो , तृष्णा / एक हल्लाएको वन जस्तै। यदि तपाइँ ध्यान दिनुहुन्छ, गेब्रिएला मिस्ट्रल (बेथलेहेम को स्थिर को रोमान्स) द्वारा यो कविता हामीलाई assonance बच्चा, जीवित र हल्लाएको रूपमा दिन्छ; जसरी उनीहरु उठ्छन् र नजिक आउँछन्। तिनीहरू स्वरमा अन्त्य हुन्छन्, तर व्यञ्जनमा छैनन्।
अन्य तत्वहरु लाई विचार गर्न को लागी
कसरी एक कविता लेख्न को आधारभूत अवधारणाहरु को एक हो मेट्रिक्स। यो एक पद मा सिलेबल्स को योग हो र यो धेरै महत्वपूर्ण छ किनकि प्रत्येक पद अन्तिम शब्द संग सम्बन्धित सिलेबल्स को एक संख्या हुनु पर्छ। यदि त्यो शब्द हो:
तीव्र: एक थप शब्दांश।
Llana: रहन्छ जहाँ तपाइँ छ।
Esdrújula: एउटा अक्षर घटाईन्छ।
निस्सन्देह, तब उनीहरुलाई दिन सकिन्छ काव्य लाइसेन्स जस्तै synalepha, syneresis, अंतराल, आदि। त्यो एक कविता वा सम्पूर्ण कविता को मीटर परिवर्तन हुनेछ।
अन्तमा, तपाइँ पनि संरचना मा खाता मा लिनु पर्छ। त्यो हो, कसरी विभिन्न पदहरु कविता र निर्माण गर्न जाँदैछन्। यो भनिएको छ कि त्यहाँ धेरै प्रकार छन्, र प्रत्येक एक एक वा अन्य संग अधिक सहज महसुस गर्न सक्नुहुन्छ।
एक कविता लेख्न को लागी सल्लाह
खाली पृष्ठ सामना गर्दा, तपाइँ एक कविता लेख्न को लागी धेरै स्पष्ट हुनु पर्छ, र त्यो निम्न को माध्यम बाट जान्छ:
थाहा छ तपाइँ के बारे मा कविता लेख्न जाँदै हुनुहुन्छ
एक प्रेम कविता लेख्न एक घृणा कविता जस्तै छैन। न त यो एक काल्पनिक कविता, वा एक विशिष्ट विषय संग एक भन्दा एक यथार्थवादी कविता लेख्न को लागी हो। सुरूवात गर्नु अघि, तपाइँ जान्न को लागी तपाइँ के बारे मा लेख्न चाहानुहुन्छ, किनकि केहि वाक्यांशहरु राखीरहेको छ कि बिना थप हलचल को कविता कसै द्वारा गरिन्छ, तर त्यो कविता र केहि बताउनुहोस् पहिले नै अधिक जटिल छ।
गीतात्मक भाषा मा मास्टरिंग
कविता एक उपन्यास होईन जसमा तपाइँ विस्तार गर्न सक्नुहुन्छ कि तपाइँ के चाहानुहुन्छ, न त यो एक छोटो कथा हो जहाँ तपाइँ शब्दहरु को एक सीमित संख्या संग एक कहानी बताउनुहुन्छ। एक कविता मा तपाइँ शब्दहरु को कारण मात्र होईन, तर लय, आवाज को कारण मात्र शब्दहरु लाई सुन्दर बनाउन को लागी छ ...
सन्देश र उद्देश्य को लागी तपाइँ खोज्दै हुनुहुन्छ को बारे मा स्पष्ट हुनुहोस्
यो महत्त्वपूर्ण छ कि, के को बारे मा लेख्न को लागी जान्न को लागी, तपाइँ पनि दिमागमा राख्नुहुन्छ तपाइँ के भन्न चाहानुहुन्छ, त्यो कविता लेख्न को लागी लक्ष्य के हो, वा तपाइँ पाठकलाई महसुस गर्न चाहानुहुन्छ जब उनी तपाइँलाई पढ्छन्।
यदि तपाइँ उनीहरुलाई आवश्यक छ भने रूपकहरु को उपयोग गर्नुहोस्
रूपक एक हो कविता को विशेषता तत्व, र उनीहरु भाषा सुशोभित गर्न सेवा गर्छन्। अब, ती बाट जानुहोस् जुन पहिले नै परिचित छन् र सबैले बनाउँछ र तपाइँको आफ्नै बनाउँछ। यो उनीहरु मा आफैंलाई आधार गर्न को लागी ठीक छ, तर "ओस का मोती" वा "रोकाउने जुनून" पहिले नै धेरै प्रयोग गरीएको छ, त्यसैले उनीहरु तपाइँको दर्शकहरु लाई खुशी पार्ने छैनन्।
एक कविता को सबै पक्षहरु लाई नियन्त्रण गर्नुहोस्
हामी विशेष गरी कविता, मिटर, पदहरु को संख्या, संरचना को बारे मा कुरा गरीरहेछौं ... तपाइँ तल झर्नु भन्दा पहिले, तपाइँ कसरी कविता यो क्रम मा रहन चाहनुहुन्छ निर्धारण। यस प्रकार, तपाइँ एक भाग मा अधिक जोड दिन सक्नुहुन्छ, वा बताउनुहोस् कि तपाइँ कविता मा के चाहानुहुन्छ जस्तै यो एक शुरुवात, मध्य र अन्त्य थियो।
विराम चिह्नहरूदेखि सावधान रहनुहोस्
कि तपाइँ लेख्दै हुनुहुन्छ एक कविता को मतलब यो हैन कि विराम चिह्न सम्मान गर्नु हुँदैन। जे होस् त्यहाँ अधिक लचीलापन हुन सक्छ, सच्चाई यो हो कि तपाइँ उनीहरु लाई पनि प्रयोग गर्नु पर्छ, विशेष गरी पद र श्लोकहरु बीच विराम दिन को लागी।
अन्यथा तपाइँ पाउन सक्नुहुन्छ कि तपाइँको सन्देश यति लामो छ कि पाठक लाई यो पनि याद छैन कि यो कसरी शुरू भयो, वा त्यो सास फेर्ने र कविता को समग्र अर्थ काट्छ।
एक पटक तपाइँ समाप्त, कविता सुनाउनुहोस्
यो सबै भन्दा सजिलो तरीका हो यदि कविता साँच्चै "जीवन छ।" त्यो के हो? ठिक छ, यो जान्न को बारे मा यदि यो ध्वनि हो, यदि यो ताल, intonation, अर्थ छ र यदि यो साँच्चै तपाइँ केहि जगाउनुहुन्छ। यदि जब तपाइँ यसलाई पढ्नुहुन्छ यो जीवन वा पकड गर्न को लागी लाग्दैन, निराश नहुनुहोस् र फेरि प्रयास गर्नुहोस्।
महत्त्वपूर्ण कुरा र तपाइँ के प्रयास गर्नु पर्छ कि ती केहि लाइनहरु मा तपाइँले चाहानु भएको सबै कुरा बताउन को लागी हो, र त्यो प्रत्येक शब्द भावना को एक बोझ हो कि सम्पूर्ण सेट "काव्यात्मक" बनाउँछ।
कविता अध्ययन गर्नुहोस्
सल्लाह को अन्तिम टुक्रा हामी तपाइँलाई दिन्छौं कविता को साहित्यिक विधा संग गर्न को लागी सबै कुरा को अध्ययन गर्नुहोस्। एक मात्र तरिका तपाइँको कविता मा राम्रो प्राप्त गर्न को लागी र यस बिषय मा एक विद्वान हुन को लागी यसको बारे मा सिक्दै छ। तेसैले, यो मात्र कविताहरु पढ्न को लागी पर्याप्त छैन र हेर्नुहोस् कि कसरी अन्य लेखकहरु को पूर्वकाल र अब कविता बनाईएको छ, तर तपाइँ जान्न को लागी नींव, इतिहास र रूपान्तरण यो भैसकेको छ तपाइँको आफ्नै बाटो पत्ता लगाउन को लागी आवश्यक छ।
के तपाइँ अब एउटा कविता लेख्न हिम्मत गर्नुहुन्छ?
लेखको पूर्ण मार्ग: वर्तमान साहित्य » विधाहरू » कविता » कसरी कविता लेख्ने
Goretti Irisarri र जोस गिल रोमेरो। ला traductora को लेखकहरु संग साक्षात्कार